Itshaja yodonga ye-Aukey enezihlanganisi ezi-4 ezahlukeneyo zohambo | Ndisuka mac
Sithetha ngemveliso esiyifumene nenkampani i-Aukey ngalo maxesha apho kuya kufuneka siye kwelinye ilizwe kwaye asifuni kuthwala iadaptha zodonga ezahlukeneyo nganye nganye. Kule meko, itshaja ye-USB isinika amazibuko ama-4 onxibelelwano ukongeza ukuya kuthi ga kwizixhobo ezine ngaxeshanye kunye neeadaptha zodonga ezi-4 Bakhonza eUnited States, eUnited Kingdom, eOstreliya naseYurophu.
Ngokubanzi, itshaja eseludongeni enesidima sokuba liqabane elifanelekileyo lokuhamba, kuba bonke abo bafuna iadaptha ezininzi baya kuyisombulula kube kanye. Aukey, ubukwimakethi yokuncedisa izixhobo iminyaka embalwa kwaye yenye enye sinokufumana ixabiso elifanelekileyo kwaye oko kunomdla ngokwenene ukuba sihamba kakhulu.
Inyani yile yokuba ukuba siza kuhamba kwelinye ilizwe uqhagamshelo lodonga lunokuba yingxaki yokwenyani kwaye ngale nto Ishaja ye-USB 4 Izibuko asiyi kuba nangxaki. Eyona nto ibaluleke kakhulu kuyo, inokuhlawulisa nayiphi na i-iPhone okanye isixhobo se-Android ukuya kuthi ga kwi-2,4A ngezibuko ngalinye, nto leyo eyenza kube lula kuthi ukubiza i-smartphone, ithebhulethi kwangaxeshanye kwaye Akukho sidingo sokuthenga iiplagi ezingaphezu kwesinye yelizwe esilityelelayo kuba sonke sine4 kwenye.
1 Umxholo webhokisi
2 Ukucaciswa kwetshaja kunye nokuSebenza
Njengoko besesitshilo, itshaja iyongezwa apho sinokuqhagamshela ngokulula kuzo zonke iziseko zodonga, iiadaptha ezine kunye nemiyalelo yokusetyenziswa. Kule meko, kufuneka icaciswe ukuba ayisiyiyo imodeli exhasa ukutshaja ngokukhawuleza, kodwa ndicinga ukuba banayo. Ngayiphi na imeko, yenza umsebenzi osisiseko esifuna ukuwubiza i-smartphone okanye ithebhulethi yethu kulo naliphi na ilizwe.
Ukucaciswa kwetshaja kunye nokuSebenza
Ukusebenza kusisiseko kwaye ukuze udibanise iadaptha nganye eyahlukileyo eludongeni, inethebhu esinokuyenza cinezela kwaye ukhulule iadaptha. Ngale ndlela kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye ngaphezu kwako konke ukukhawulezisa ukutshintsha enye ibe yeyenye.
Kule meko sinemodeli ye-Aukey PA-U41 kwitshaja. Yamkela igalelo langoku le-100-240V-0,5A 50 / 60Hz kunye Iziphumo zibonelela nge5V 4,8A (nganye yazo ubuninzi ngu-2,4A) esivumela ukuba sihlawulise ngokuzolileyo. Ukongeza, ubungakanani bayo ayisiyiyo enkulu kwaye inezinye imilinganiselo ye-72 x 55 x 27 mm kunye nobunzima obumalunga ne-85g. Ixabiso layo ngu Akukho mveliso ifunyenweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Itshaja yodonga Aukey enezihlanganisi ezi-4 ezahlukeneyo zohambo
IMacBook Air 2017 kunye neMacBook Pro TB ifika kwicandelo elihlaziyiweyo lika-Apple